2 မှ4နေ့ရက်များအတွက်စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးဖြစ်အံ့ဆဲဆဲစာမေးပွဲအဘို့အဖှဲ့စညျး Get လုပ်နည်း
တစ်ဦးစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့လေ့လာနေသင်သာပြင်ဆင်ထားရန်ရက်အနည်းငယ်ရှိလျှင်ပင်, ကိတ်မုန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူအတော်များများစာမေးပွဲစတင်သည်ရှေ့မှာစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့လေ့လာနေမိနစ် cramming ကပါဝင်ပတ်သက်ထင်မစဉ်းစား, အချိန်အများကြီးပါပဲ။ သငျသညျကိုလေ့လာရန်ရှိသည်ကာလ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ဒုက္ခတည်းခိုသင်တစ်ဦးစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့လေ့လာနေပါတယ်သည့်အခါအာရုံစူးစိုက်ရှိပါကစုံလင်သောအရာ, သင် session တစ်ခုနှုန်းအတွက်ထားရန်ရှိသည်အမှန်တကယ်လေ့လာနေအချိန်လျော့ကျသွားသည်။
မပူပါနဲ့။ ဒါဟာရက်ပေါင်းပဲလက်တဆုပ်စာအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့လေ့လာဖို့လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေပါပဲ။ အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပြီး, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။
အဆင့်တစ်: မေးပါ Organize နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်စာမေးပွဲတွင်၏အဘယ်အရာကို type ကိုသင့်ရဲ့ဆရာကိုမေးပါ။ အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှု? စာစီစာကုံး? စာမေးပွဲအမျိုးအစားအကြောင်းအရာအသိပညာ၏သင့်အဆင့်တစ်ခုအက်ဆေးစာမေးပွဲနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သငျပွငျဆငျဘယ်လိုအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သူသို့မဟုတ်သူမပြီးသားသင်တဦးတည်းပေးထားမမူလျှင်ပြန်လည်သုံးသပ်စာရွက်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုလမ်းညွှန်အဘို့သင့်ဆရာကိုမေးပါ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုစာရွက်သင်စမ်းသပ်ပြီးပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်အဓိကအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ သင်ဤရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလျှင်, သင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်သိရန်မလိုအပ်ပါဘူးအရာများအတွက်လေ့လာနေတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းသို့မဟုတ် FaceTime သို့မဟုတ် Skype ကိုကနေတဆင့်ဖြစ်နိုင်သော-လျှင်ပင်မနက်ဖြန်ညကို set up လေ့လာမှုတစ်ခုဖက်ကိုရယူပါ။ ဒါဟာရိုးရိုးသားသားသငျသညျစောငျ့ရှောကျနိုငျသောသင်၏အအဖွဲ့သည်အပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်ဖို့ကူညီပေးသည်။
အိမ်မှာသင့်ရဲ့မှတ်စုများကို ယူ. ဟောင်းဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, ကျောင်းစာအုပ်, တာဝန်တွေ, နှင့်ယူနစ်ကနေကမ်းကိုစမ်းသပ်ခံရ။
သင်၏မှတ်စုများ Organize ။ သင်အမှန်တကယ်သင်သည်ကျမ်းစာ၌ရေးထားတော့အဘယ်အရာကိုဖတ်နိုင်အောင်ပြန်ရေးသို့မဟုတ်သူတို့ကိုထရိုက်ပါ။ ရက်စွဲများအရသိရသည်သင့်ရဲ့ကမ်း Organize ။ သငျသညျပျောက်ဆုံးနေဘာမှသားထားပါ။ (အဘယ်မှာရှိအခန်း2ကနေ Vocab ပဟေဠိရဲ့?)
သငျသညျရှိပစ္စည်းပြန်သုံးသပ်ပါ။ သင်သိလို့ယူဆတယ်နေအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်စာရွက်တဆင့်သွားပါ။ သင်တို့အပေါ်မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်ဘာမှမမီးမောင်းထိုးပြ, သင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, ကမ်းခြင်း, မှတ်စုမှတဆင့်ဖတ်ပါ။ အမှတ်ရစရာ, သင့်စာအုပ်ရဲ့အခနျးတစျဆငျ့ Go ကိုသင်ရှုတ်ထွေးခဲ့ကဏ္ဍများ rereading, မရှင်းလင်း, သို့မဟုတ်မ။ စာမေးပွဲဖြင့်ဖုံးလွှမ်းတစ်ဦးချင်းစီအခနျးကွီး၏နောက်ကျောကနေမေးခွန်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ပါ။
သငျသညျပြီးသားသူတို့ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, စာလုံးကတ်အောင် မေးခွန်းတစ်ခု, အသုံးအနှုန်း, ဒါမှမဟုတ်ဝေါဟာရစကားလုံးကဒ်၏အရှေ့ဘက်အပေါ်နှင့်နောက်ကျောအပေါ်အဖြေကိုအတူ။
အဆင့် 2: အမှတ်ရစရာများနှင့်ပဟေဠိ
သငျသညျလုံးဝသင့်ရဲ့ဆရာနဲ့အတူနားမလည်ခဲ့ဘူးဘာမှမရှင်းလင်း။ ပျောက်ဆုံးပစ္စည်း (အခန်း2ကနေကြောင်း Vocab ပဟေဠိ) အတွက်မေးကြည့်ပါ။
ဆရာများမကြာခဏအနေနဲ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းမပြုမီတစ်ရက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ဒါကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမပြန်လည်သုံးသပ်လျှင်, အနီးကပ်အာရုံစိုက်နှငျ့သငျမီညကိုဖတ်ခဲ့ဘူးဘာမှမချရေးပါ။ ဆရာယနေ့ကဖျောပွပါကအာမခံ, စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါ်ပဲ!
နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံး, သင့်စာလုံးကတ်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်မေးခွန်းများမေး (သင်လူတန်းစားများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်အခါစတင်ရန်, နေ့လယ်စာမှာလေ့လာမှုခန်းမစဉ်အတွင်း, etc) ။
45 မိနစ်များအတွက် timer နေရာမှာ Set, နှင့်သင်ပြီးသားကို အသုံးပြု. မသိရပါဘူးသောပြန်လည်သုံးသပ်စာရွက်ပေါ်အရာအားလုံးအလွတ်ကျက် mnemonic devices တွေကို အတိုကောက်များကဲ့သို့သို့မဟုတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်သီဆို။ အတွတ် timer ကိုပယ်တတ်သည့်အခါငါးမိနစ်ချိုးယူပြီးလျှင်, အခြား 45 မိနစ်ပြန်စတင်ရန်။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုမိတ်ဖက်ရောက်ရှိသည်အထိပြန်လုပ်ပါ။
ပဟေဠိ။ သင့်ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာ လေ့လာမှုမိတ်ဖက် ရောက်ရှိ (သို့မဟုတ်သင့် mom, နောက်ဆုံးတော့သင် quizzing မှ concedes), တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြစ်နိုင်စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေမေးအလှည့်ယူပါ။ သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးလုပ်နေတာခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့တွင်တဦးချင်းစီတစ်ဦးအလှည့်ကိုတောင်းဆိုနေတာနှင့်ဖြေဆိုရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သငျသညျတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုရှိပါကသင်တို့အဘို့အချိန်ရှိသည်အတိုင်း, သင်ကဲ့သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုဆန့ ်. နှင့်အဆင့်2ပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ကံကောင်းပါစေ!
တစ်ဦးဆား Crystal ဥယျာဉ်တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
Ile အီဖေး (နိုင်ဂျီးရီးယား)
'' အဆိုပါဗျည်းအက္ခရာသီချင်း '' ဂစ်တာ Chord
စာအုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Stephenie Meyer တို့က '' Twilight ''
အဆိုပါ Balance Sheet ၏ Equity ပုဒ်မမှတဆင့် Walking
မတ်ေတာသညျမှအမုန်းတရား Turn လုပ်နည်း
အီတလီ Pronominal ကြိယာ
1989 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း: Calc တစ် PLAYOFF ခုနှစ်တွင်ဆွတ်ခူး
အဆိုပါ Dodge Challenger RT ကိုများအတွက်ပထမဦးစွာတစ်နှစ်တာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: V ကို-1 ပျံဗုံး